Kooxaha Atletico Madrid iyo Bayern Munich oo maanta soo bandhigay saxiixyadooda cusub ee João Félix iyo Lucas Hernandez…. + SAWIRRO – Gool FM
Kooxaha Atletico Madrid iyo Bayern Munich oo maanta soo bandhigay saxiixyadooda cusub ee João Félix iyo Lucas Hernandez…. + SAWIRRO
(Yurub) 08 Luulyo 2019. Kooxaha Atletico Madrid iyo Bayern Munich ayaa maanta si rasmi ah u soo bandhigay saxiixyadooda cusub ee João Félix iyo Lucas Hernandez.
Kooxda reer Spain ee Atletico Madrid ayaa Weeraryahanka reer Portugal ee Joao Felix kala soo saxiixatay Benfica, waxaana ay ku soo qaateen Adduun dhan 126 milyan oo euro oo u dhiganta 113 milyan oo gini, isagoo noqday ciyaaryahanka shanaad ee ugu qaalisan taariikhda.
Kaliya Neymar Jr, Kylian Mbappe, Philippe Coutinho iyo Ousmane Dembele ayaa lacago ka badan lagu iibsaday Felix, waana da’yarka labaad ee ugu qaalisan kubadda cagta kaddib Mbappe.
Haddaba kooxda reer Spain ee Atletico Madrid ayaa maanta si rasmi ah garoonka Wanda Metropolitano ku soo bandhigtay laacibka reer Portugal ee Joao Felix, isagoo sare u haya maaliyadda lambarka 7-aad ee uu xiran doono xilli ciyaareedka cusub ee 2019-20.
Ka hor João Félix waxaa lambarka 7-aad horay ugu soo xirtay kooxda Atletico Madrid xiddigaha Juninho Paulista, Diego Forlan iyo Antoine Griezmann.
Dhinaca kale kooxda Bayern Munich ee dalka Jarmalka ayaa soo bandhigtay saxiixeeda cusub ee Lucas Hernandez, kaasoo ay kala soo wareegeen Atletico Madrid.
Kooxda reer Germany ayaa horay u shaacisay in Lucas Hernandez ay ka saxiixatay heshiis shan sano gaarsiisan, waxaana maanta lagu soo bandhigay garoonka Allianz Arena, isagoo sare u haya maaliyadda lambarka 21-aad ee uu xiran doono xilli ciyaareedka cusub ee 2019-20.
Xulka Ivory Coast oo u gudbay wareega siddeed dhamaadka koobka qarammada Afrika, kaddib markii ay si dirqi ah kaga adkaadeen Mali… + SAWIRRO